19 desambra 2010 – Advento IV – FJKM Ambavahadimitafo 19 desambra 2010 – Advento IV |
19 desambra 2010 – Advento IV
Publié le 13 décembre 2010 à 08:12
6 andro sisa dia higadona ny Krismasy ary velom-panontaniana isika hoe: ho Krismasy manao ahoana re! Tsy misy ho tanteraka anefa afa-tsy izay voalazan’ny Soratra Masina irery ihany koa aoka samy handinika izay voalazan’ny Tenin’Andriamanitra. Feno haizina tokoa izao tontolo izao ary ny fahafatesana no te-hanapaka hatrany eto an-tany. Mino isika fa i Jesoa; Ilay Teny tonga nofo no Ilay Mazava manafoana ny herin’ny fahafatesana. Tonga olona Andriamanitra! Hoy Irené, Rain’ny Fiangonana: “Noho ny amin’ny zaza dia tonga zaza Izy; noho ny amin’ny lehilahy dia tonga lehilahy Izy; noho ny mahantra dia tonga mahantra Izy; noho ny Mpanota dia nanaiky ny fahotantsika Izy; noho ny olona rehetra dia tonga noana sy ory ary nijaly sy maty Izy.” Noho ny fahaverezantsika dia tonga tety an-tany Jesoa mba hitady antsika. Ny fivavahana kristiana irery ihany no hany ivavahana amin’Andriamanitra mietry fa ny sisa dia vavaka atao amin’andriamanitra asandratra. Hoy ny Fanekem-pinoantsika ao amin’ny Symbole des Apôtres hoe: “Izy no mazava avy amin’ny mazava; Andriamanitra tokoa avy amin’Andriamanitra; nateraka fa tsy natao…Izy no nahariana izao tontolo izao. Noho ny amintsika olombelona sady ho famonjena antsika dia nidina avy tany an-danitra Izy, ary nataon’ny Fanahy Masina nofo avy tamin’i Maria Virjiny, dia tonga olona Izy.” Ekena tokoa fa tsy misy ny Paska sy ny Pentekosta raha tsy ao ny fetin’ny fahatongavan’Andriamanitra ho olona na ny Krismasy. Azo ekena ho anganongano ny Krismasy izay nantsoina hoe fetin’ny fahazavana tany am-piandohana ho solon’ny alin-dratsy sy ny fomba maizina nanome vahana ny fanompoan-tsampy fa izay zava-nisy marina teto amin’izao tontolo izao dia ny fidinan’Andriamanitra ho olona izay anehoana ny fietreny sy ny fanatonany ny olombelona. Tonga olona tokoa Jesoa! manaporofo izany ny fisiako sy ny fisianao ry Zanaky ny Mazava!